Bar antserasera iray natsangan’ny orinasa ao St Petersburg ho an’ireo Rosiana naniboka ny tenany · Global Voices teny Malagasy
Voarakitra ny fahafatesan'olona voalohany, mihamaro ny Rosiana manakaton-trano
Voadika ny 28 Marsa 2020 3:37 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, Ελληνικά, Nederlands, русский, عربي, українська, English
Zahao ny pejy manokan'ny Global Voices amin'ny fiantraika manerantanin'ny COVID-19.
Orinasa Rosiana iray no nahita hevitra hanokatra bara antserasera mba hahafahan'ireo tia miresaka manirery mba hisento amin'ny fitokanamonina.
Mihamaro ireo Rosiana no nisafidy ny hitoka-monina taorian'ny fiakaran'ny tranga voamarina fa mitondra coronavirus. Tamin'ny fotoana nanoratana, efa manakaiky ny 200 izany. Androany [19 marsa] ny manampahefana rosiana nanamafy ny fisian'ny olona voalohany matin'ny coronavirus ao amin'ny firenena: vehivavy lehibe 79 taona efa taizan'aretina. Niditra aterineto ny mpiasan'ny fitsaboana haneho ny ahiahiny manoloana ny fiomanan'ireo hopitaly manerana ny firenena, izay feno ireo mararin'ny pnemonia ny efitrano[ny] — izay soritr'aretina COVID-19.
Nandray fepetra henjana ny governemanta rosiana hisorohana ny fielezan'ny aretina. Tahaka ny tamin'ny 7 marsa, mila mihiboka mandritra ny 14 andro ireo mpandeha rehetra avy amin'ny firenena efa tratran'ny aretina vantany vao tonga. Mety hampigadra mandritra ny fotoana maharitra ny fanitsakitsahana izany fitokana-monina izany; ho fampiharana izany, mila mandalo ilay rafitra mampiady hevitra fakantsary mamantatra endrika ny olona an'ny fiadidiana ao Moskoa amin'izao fotoana izao ny tsirairay ao amin'ity tanàna ity. Tamin'ny herinandro namoahana ny lahatsoratra teny anglisy, nanakatona ny sisintaniny tamin'ny vahiny rehetra i Rosia.
Tahaka ny ankamaroan'ny olona hafa, nikoropaka nandroaka entana maro tao amin'ny tranombarotra goavana ny Rosiana ary miomana ny hanakaton-trano mandritra ny fotoana maharitra. Miditra serasera ry zareo ary mizara ireo fikafika sy traikefa amin'ny videoblaogy sy lahatsoratra Facebook manjohy ny farangon-teny (hashtag) #яостаюсьдома (mijanona ato an-trano aho). Raha fehezina, nanaraka ny Stay the Fuck Home [mipetraha ho'aho any an-trano], fanentanana iraisampirenena iray mandrisika ny olona rehetra tsy hanavahana taona hijanona an-trano, ao anatin'ny ezaka avotr'aina “hampiondrika mahitsy ny biloka.” Amin'ny alalan'ny fampihenana ny fifampikasohana no mampihena ny fifindrana, ary avy amin'izany izy mampisoroka amin'ny fampidirana hopitaly sy ny faharavàn'ny rafi-pitsaboana.
Tafiditra an'aterineto ny Bar fa hoe Mipetraha Ao An-Trano tamin'ny 14 marsa. Famoronan'ny Fiaraha-mientana Shishki, aingan'asa iray miorina ao St Petersburg ary ny tanjony dia, “sisintany mikatona sy fo misokatra,” hanampy ireo olona nanava-tena manerana izao tontolo izao hifandray [an-tserasera] amin'ny hafa tahaka azy eo anoloan'ny labiera na divay amin'ny vera. Azon'ny mpisera idirana ny iray amin'ireo efikarajia misokatra 24 ora ampiatranoan'ny sehatra fanaovana videokaoferansa Whereby mampiasa fotsiny ny fitety aterinetony, mamelona ny webcam raha safidian-dry zareo izany. Samy manana lohahevitra tsy itoviana amin'ny hafa ny “bars” efatra izay samy mahazaka olona 12 avy ny efitra tsirairay: ohatra, iray amin'izany ireo mampivondrona amin'ny toerana iray ireo mpitia design sy zavakanto, ny iray hafa mamela ny mpisera hampihatra ny teny anglisy.
Araka ny Calvert Journal, nihoatra ny 30.000 ireo mpisera nitsidika ny tranonkala tao anatin'ny 24 ora nisokafany. Nilaza tamin'ny gazetiboky an-tserasera The Village ny tale ara-pamoronana, Mikhail Shishkin, fa tonga ny hevitra nandritra ny fanakatonana ny biraon'ny Fiaraha-Mientana Shishki, noho ireo mpiasa nitady ny fomba hafa hifandraisana an-tserasera :
Manantena i Shishkin fa, raha avy ny fotoana ikatonan'ny bar tena izy afaka herinandro vitsivitsy, dia mbola afa-mifandray ao amin'ireo efi-karajia an-tserasera natokana ho amin'izany ny mpanjifa. Nolazainy fa nanampy fanorenana maro ao St Petersburg izy sy ireo mpiara-miasa aminy hanangana ny “sampana nomerika” ao amin'ny tranonkala.